Dipole Anteenada Iibka | Anteenada Gudbinta FM | Anteenada Baahinta FM
Marka lagu daro 1 bay FM-DV1, waxaan sidoo kale leenahay 2 bays, 4 bays, 6 bays, iyo 8 bays FM-DV1 anteeno.
Ku saabsan FM-DV1 Dipole FM Antenna
Maxay tahay sababta u dooratey FM-DV1 FM Power Sare ee Antenna?
Side-Boodhka khasaare hoose
Kala-baxa tooska ah
Waa maxay FM-DV1 FM Dipole Antenna?
FMUSER FM-DV1 dipole FM anteeno waa nooc anteeno dipole ah oo loo isticmaalo nidaamyada baahinta raadiyaha FM-ta, si loo helo signalka soo saarista raadiyaha FM-ga oo si hufan ugu diro signalka. Nidaamyada anteenada badan ee anteenada ah ayaa kor u qaadi kara faa'iidada anteenada gudbinta.
Waxqabadka ugu Fiican:
Xidhiidhada Iibka Dheeraadka ah ee Antenna Power Splitter:
brand Names Range Frequency Functions More
FMUSER FU-P2 87-108Mhz Antenna Power Spltter Booqo
FMUSER FU-P4 87-108Mhz Antenna Power Spltter Booqo
1. Waa maxay saddexda nooc ee anteenooyinka?
Jiho dhan, jihayn, iyo jiho badheed waa saddexda nooc ee anteenada ugu badan. Anteenada dipole waa anteenada inta badan loo isticmaalo dhanka gudbinta raadiyaha, gaar ahaan idaacadaha FM-ka qaarkood.
2. Waa immisa qiimaha anteenada idaacada?
FMUSER waa soo saaraha khabiirka ee nidaamyada anteenada baahinta oo dhameystiran iyo xirmo raadiyaha oo dhameystiran. Waxaad ka iibin kartaa noocyo kala duwan oo qalab idaacado ah iyo xalal lagu kalsoonaan karo oo FMUSER ah qiimo ka hooseeya qiimaha suuqa, kaas oo kaliya kugu kici kara boqolaal doolar, oo aad uga hooseeya qiimaha ay bixiyaan dhammaan soosaarayaasha kale ee aad ka heli karto. Gudbiyaha, anteenada, iyo qalabka la xidhiidha inta badan waxay ku kacayaan ugu yaraan $3500 gudbiyaha LPFM ee FCC-ku aqbalay iyo anteeno jaban oo aad adigu rakibtay.
3. Waa maxay noocyada baahinta raadiyaha?
Jiilalkii ugu dambeeyay ee ugu horrayn ku koray raadiyaha FM-ta, waxaa jira dad aad u tiro badan oo aan garaneynin baaxadda baahinta raadiyaha sida AM, FM, Radio Pirate, Raadiyaha dhijitaalka ah ee dhulka, iyo Satelite-ka.
4. Waa maxay anteenada ugu waxtarka badan?
Anteenooyinka raadiyaha baabuurka waxay yeelan karaan waxtarka anteenada -20 dB (wax ku oolnimada 1%) ee inta jeer ee raadiyaha AM; sababtoo ah anteenooyinku aad bay uga yar yihiin nus-mawjadaha inta jeer ee shaqada, taas oo si weyn hoos ugu dhigaysa waxtarka anteenada.
5. Waa maxay anteenooyinka loo isticmaalo baahinta raadiyaha?
Anteenooyinka Dipole waa nooca ugu badan ee anteenada la isticmaalo waana dhinac walba, faafinta soo noqnoqoshada raadiyaha (RF) tamarta 360 digrii ee diyaaradda jiifta. Aaladan waxa loo dhisay inay noqdaan kuwo soo noqnoqda nus ama rubuc mawjadaha dhererka inta jeer ee la isticmaalo.
6. Waa maxay anteenada dipole FM?
Anteenada dipole waxay ka kooban tahay laba tiir ama qaybo. Halkii mawjada nuska ah dipole, lug kasta oo ka mid ah dipole waxay noqon doontaa dhererka rubuca koronto. Dhererka dipole waxaa lagu go'aamiyaa inta jeer ee hawlgalka. Qeybta baahinta FM-ta waxay ka bilaabataa 87.5 MHz ilaa 108 MHz.
1 Bay FM Anteenada
151cm*123cm*14cm 18KG, culeyska biilasha rarida hawada 52kgs
2 Bay FM Anteenada
151cm*123cm*23cm 38KG, culeyska biilasha rarida hawada 85kgs
4 Bay FM Anteenada
151cm*123cm*23cm 30KG, culeyska biilasha rarida hawada 85kgs
6 Bay FM Anteenada
8 Bay FM Anteenada
170cm * 17cm * 16cm, 30KG, culeyska biilasha dhoofinta hawada 30kgs
Bay Waji Gain Miisaanka Dhererka Xamuulka dabaysha (v=160km/h) Qalab toosan
dB Isugeyn kg m kg 1kW 3kW 5kW